Kunyangwe iwe uri muridzi wechitoro eCommerce kana ontluikende blogger, chinhu chimwe chete icho mawebhusaiti ese akafanana ndechekushandisa kwemavara ezvinyorwa. Kuisa imwe pfungwa pane yako yakaratidzirwa mavara (kana typographic dhizaini) hazvina kusimbisa zvinoshamisa kuti kugadzira yako saiti inogadzirisa uye kuve nechokwadi chekubudirira kwayo.
Hechino chinhu, iwe unogona kunge uine chinotyisa WordPress-sjabloon kana kuisa zvinonakidza mifananidzo pawebsite yako ZVINOKOSHA kana iwe uchishandisa onaantrekkelijk basislettertype (kana zvakanyanya Comic Sans!), Ipapo iwe uchazopedzisira wikiZa.
Uyezve, iwe unoshaya ruit huwandu hwekunakisa kwewebhu typografie iyo inowanikwa online.
Zvechokwadi, kana iwe uchida kuve nechokwadi chokuti iyo mhando yaunosarudza mitoro yakavimbika ruit mamwe makombiyuta, unofanira kusarudza "webhuti yakachengeteka".
Ne 25 yedu yakaisvonaka yewebhu yakachengeteka mafonti, iwe uchava nechokwadi chokuti unoshamisa webtypografie yewebsite yako iyo inoshanda nguva yose, pakuguma kwechikamu ichi!
1 Chii chinonzi Webkluis?
2 I25 Prachtige webveilige lettertypen KwaWebsite Yako
2.6 11. Koerier Itsva
Chii chinonzi Webkluis?
Mafaira akachengeteka eWebhu ndiwo mafonti anowanzotanga kushandiswa kune dzakawanda zvezvigadziri – makombiyuta, foni dzemafoni, maTV, uye mahwendefa.
Munyika yakanaka, iwe unofanirwa kuva nekwanisi yekusarudza chero mhando yaunoda iwe webhusaiti yako. Muzvokwadi, kune zvibvumirano kune rudzi rwemafonti aunogona kushandisa.
Nyaya dzemakombiyuta uye vashandisi vewebhu vanouya nesheti ye fonti inotanga kuiswa nevanokugadzira, zvisinei, maitiro avo anogona (uye kazhinji) anosiyana. Pakanga pasina purogiramu yakasarudzwa yakagoverwa nevashambadzi vose.
Kana iyo simboti yawakashandisa yakanga isina kuiswa pamakombiyuta emunhu, ipapo webhusaiti yako ichadzoka kufonti yemutauro, iyo dzimwe nguva ingaguma isingaverengeki.
Mune zvimwe kuti urege izvozvo, web designers vave vachishandisa iyo Nhamba Dzakawanda dzeWebhu kuti Microsoft yakabudiswa muC1996 seyero yemahofisi akawanda webusaiti. Izvi zvakagadzirwa zvemashoko pakupedzisira yakava "webhutete yakachengetedzwa", nokuti pasinei nekombiyuta, mafonti achaonekwa zvakanaka pawebsite yako.
Mhinduro shomanana: Hazvo.
Kana iwe uchida kuchengetedza maitiro uye mavara ekuona webhusaiti yako yakafanana, ipapo kushandisa webhuti yakachengeteka inoita kuti webhusaiti yako ione sezvawakafunga kuti ive.
Zvechokwadi, anenge ose webhusaiti nhasi ari kushandisa imwe nzira yewebhu yakachengetedzwa fomu. Webhu vakagadziri vanogara vachikurudzira kusarudza webhuti yakachengeteka kuitira kuti usapinda mazita akadai, seThe Times New Roman, zvinoonekwa apo vashandisi vari kushanyira webhusaiti yako kana vasina iyo chaiyo kana tsika.
Pane nzira dzakawanda dzaungashandisa kuwedzera mafaira aya mujiji rako rewebhu, asi kana iwe usati uri mukuronga kana unenge usiri-kwete-unyanzvi hwehutano, iwe unogona kungonyora kopi yeCSS code yakasvibisepauwa ya yakasu ya yu yu yu yu yu yuuuuuuu yuuuuuuuu yuuuuuuuuuu yuuuuuuuuuuuuu kuuuuuuuuuuu ku ku ku ku ku ku..
Kana iwe usati usina chokwadi, saka ingotevera aya mashoma mashoma matanho:
Takura musoro wako weheta.php-bestand
Kopa font source / standaard code
Nyora kodhesi kumusoro kwepeji yako yepafaira.
Takura yako style.css, isa podhesi yepafaira kuti uchinje lettertype tekst yeunosarudza.
Pakuguma kwayo, iwe unofanirwa kuva ne-style sheet inoratidzika seiyi:
I25 Prachtige webveilige lettertypen KwaWebsite Yako
Links / Mhuka: Fonts.com / CSS Font Stack
11. Koerier Itsva
Você também pode acessar o blog de e-commerce do eCommerce, como um blogueiro iniciante,
Kunyangwe iwe uri muridzi wechitoro eCommerce kana spirende blogger, chinhu chimwe chete icho mawebhusaiti
Kunyangwe iwe uri muridzi wechitoro eCommerce kana spirande bloggare, chinhu chimwe chete icho mawebhusaiti
Kunyangwe iwe uri muridzi wechitoro eCommerce kana początkujący bloger, chinhu chimwe chete icho mawebhusaiti
Of u nu eigenaar bent van een eCommerce-winkel of een beginnende blogger, het enige
Kunyangwe i uri muridzi wechitoro e-commerce kana budding blogger, chinhu chimwe chete icho mawebhusaiti